Iswaafajinta Nooca Calaamaynta ee Suuqgeynta
Iyada oo xaddiga sare ee xogta laga abuuray kanaallo badan oo suuq-geyn ah, magacyada ayaa lagu xujeeyay inay abaabulaan oo ay firfircoonaan xogta saxda ah ee xogta si loo kordhiyo waxqabadka marinka iskutallaabta. Si aad si fiican u fahamto bartilmaameedkaaga bartilmaameedka, wad wadid iibsiyo badan, oo aad u yareyso qashinka suuqgeynta, waxaad u baahan tahay isku hagaaji qaybtaada astaanta ah iyadoo la kicinayo dijitaalka iyo warbixinta.
Waa inaad isku toosisaa sababta waxay ku iibsadaan leh kuwaas oo kaas oo iibsada (qeybta dhagaystayaasha) waa maxay (khibrad) iyo sida (firfircoonaanta dijitaalka ah) si dhammaan dadaalkaagu ugu jiraan isla bogga.
Sababta ugu muhiimsan ee isku xirnaashaha ayaa ah in la kordhiyo waxtarka isla markaana la isku waafajiyo dadaalkaaga si qayb walba ay ula shaqeyneyso tan kale. Ogaanshaha waxa dhagaystayaashu bartilmaameedsanayaan ayaa go'aaminaya dadaallada suuqgeynta ee ay tahay inaad u adeegsato ka qaybqaadashadooda, taas oo iyaduna kuugu jihaysa fikradaha saxda ah ee lagu hagaajinayo qaybtaada. Waa meerto isku xidhan oo isu eg.
Qaybintu waxay hagtaa istiraatiijiyaddaada
Qaybintu waxay hubinaysaa farriinta saxda ah -> inay gaadho iibsadaha saxda ah -> waqtiga saxda ah. Sidoo kale waa heshiis weyn oo dhaqaale ahaan ka waxtar badan suuqgeynta tirada badan. Adoo qaybinaya adeegsadayaasha waxqabadka sare waxaad kordhin doontaa la shaqeynta isticmaaleyaasha hadda si aad qiimo badan uga hesho dhageystayaashaada. Isku waafajinta qeybtaada istiraatiijiyadda waxqabadka waa furaha.
Adoo kasbanaya fahamka dhaqanka macaamiisha waxaad leedahay aragtiyo loo baahan yahay si loo kordhiyo beddelaadda. Qaybintu waa aaladda kaa caawineysa inaad falanqeyso isu geynta macaamiisha wadaaga astaamaha guud.
Adoo bartilmaameedsanaya qaybaha leh dareenka ugu sareeya ee ku lug lahaanshaha, waxaad horumarin kartaa istiraatiijiyad suuqgeyn wax ku ool ah oo si fiican ugu adeegta baahiyaha macaamiisha uguna dambeyntii xoojiso beddelaadda.
5 cunsur oo ka mid ah qaybaha ugu wax ku oolka ah waa inay ahaadaan
Cabbiraadda - iyada oo ku saleysan cabirka, awoodda wax iibsiga, iyo muuqaalka qeybta
Wax ku ool ah - tiro aad u muhiim ah oo faa'iido leh
Accessible - mid si fudud lagu gaari karo
Kala duwan - waa ka duwan yahay kuwa kale
Waxqabad leh - taas oo awood u siinaysa barnaamijyo / ololeyaal wax ku ool ah in la horumariyo
Si aad suuqyada si sax ah ugu kala qaybiso, waxaad u baahan tahay inaad u kala qaybiso kooxo kala duwan oo leh baahiyo gaar ah, astaamo, ama dabeecado u baahan alaabooyin gaar ah ama isku darka suuqgeynta. Waa fure si loo kiciyo qeybaha dhagaystayaasha ee aad ku ogaatay dhammaan nidaamka deegaanka dhijitaalka ah.
Qaybtaada bartilmaameedka waa in lagu saleeyaa
Macaamiilkee ayaa sida ugu fiican uga jawaabi doona magacaaga (yadaada)
Maxaa badanaa wax ka qabta baahiyaha iibsadaha iyo dhiirigelintiisa
Halka macaamiisha ay ku jiraan wareegga wax iibsiga
Sifooyinka la qiyaasi karo ee isku xira KPI-yada sida cabirka iyo saamiga suuqa
Fududaynta aqoonsiga qofka (astaanta)
Suurtagalnimada beegsiga (oo ku saleysan maaliyadeed, kheyraad, iyo tixgelin wax ku ool ah) iyo suurtagalnimada koritaanka joogtada ah ee qeybta
Waxaad u baahan tahay inaad fahamto dabeecadaha wax iibsiga ee qayb kasta oo aad horumariso astaanta macaamiisha (adoo adeegsanaya sahanno iyo raadinta boggaga internetka ee xogta hodanka ku ah).
Waxaad ubaahantahay inaad kubilaawdo daraasad DNA nooc ah si aad uqimeyso awooda / daciifnimada astaanta
Qayb si loo aqoonsado kooxaha bartilmaameedka ah ee diirada la saarayo
Aqoonso bartilmaameedyada hoose iyo kuwa sare
Samee meeleynta astaanta
Firfircoonida bartilmaameedka si aad ula macaamisho astaanta si macno leh
Markaad kala qaybiyey bartilmaameedkaaga, waa inaad raadineysaa saamileyaal, danjirayaal magac leh, wacdiyayaal, iyo u doodayaal. Adoo adeegsanaya shakhsiyaadkaas ama kooxahan, waxaad sare u qaadi kartaa waxtarka firfircoonaanta calaamadaha oo aad kordhin kartaa heerarka jawaabta.
Qaybintu waxay kicisaa firfircoonaan firfircoon
Si loo wanaajiyo hufnaanta maaraynta astaanta loona gaaro / loohayo faa iidadaada tartanka loona kordhiyo beddelaadda, waa inaad isku waafajisaa qaybta calaamadda, farriinta, iyo firfircoonaanta.
Si guul leh u kala saarista astaantaada oo aad ula jaanqaadi karto firfircoonaanta ayaa kordheysa:
Sare u qaadista maskaxda
Sameynta adeegsiga CRM-gaaga iyo ilaha xogta dhinac saddexaad, waad kala qaybin kartaa dhagaystayaashaada waxaadna ka caawin kartaa qorshaynta hawlgelinta. Adiga oo aqoonsanaya macaamiishaada ugufiican, waxaad diirada saari kartaa warbaahinta ugufiican si aad uhesho iyaga iyo fariinta ugufiican ee aad kudhexgaliso.
Markaad qorsheyneyso waxqabadyadaada suuqgeynta waa inaad maskaxda ku haysaa kala qaybsanaanta si aad u go'aansan karto waxyaabaha ka mid noqon kara isku darka suuqgeyntaada. Isku-darka saxda ah ee waxqabadyada suuq-geynta iyo gawaarida ayaa xiriir dhow la leh dabeecadaha dhagaystayaasha bartilmaameedka ah.
Qeybinta suuqa iyo dhisida soojeedinta qiimaha kaladuwan waa labo ka mid ah aaladaha ugu awooda badan suuq geynta hagida istiraatiijiyadda suuqgeynta. Waxay si cad u tilmaamaysaa bartilmaameedka macaamilka ee abuuri doona soo noqoshada ugu sarreysa ee beddelaadda waxayna siisaa aragti wanaagsan oo ku saabsan sida ugu wanaagsan ee lagu gaari karo loolana xiriiri karo.
Markaad ogaatid kala-goynta, waxaad la waafajin kartaa hawlgelinta. Kicinta firfircoonaanta waxay ku lug leedahay keenista summad nolosha suuqa. Waxay ku saabsan tahay gudbinta kobaca astaanta adoo adeegsanaya dhammaan fursadaha kanaalka si aad ula xiriirto macaamiisha isla markaana aad u qoto dheer waaya-aragnimadooda / xiriirrada ay la leeyihiin astaantaada. Aad u baahan tahay inaad:
Istaraatiijiyadda astaanta u beddelo qorshooyinka waxqabadka cusub
Samee xiriir dhow oo suuqa lala yeesho macaamiisha
Hirgelinta barnaamijyada hawlgelinta macaamiisha
Muuji sumadda wadista iyo joogitaanka kanaalka
La soco horumarka suuqa iyo waxqabadka sumadaha
Abuuritaanka isku xirnaan shucuur ama caqli gal ah oo udhaxeysa macaamiisha iyo sumaddaada si loo kobciyo kaqeybqaadashadu waa muhiim. Tani waxay la jaanqaadaysaa sida aad u farsameyso fikradaha iyo dabeecadaha la xiriira shirkaddaada.
Ka warbixinta shirkadu waxay ku siineysaa aragti wanaagsan qeybta
Warbixinta taas oo la jaanqaadeysa qeybinta waxay ka caawineysaa bixinta fikradaha loo baahan yahay si loogu wargaliyo hannaanka suuq-geynta iyo hagidda horumarinta ololaha.
Isku waafajinta qeybaha warbixinta, waxay kuu ogolaaneysaa inaad go'aamiso qeybaha ugu faa iidada badan si aad u kordhiso waxqabadka bartilmaameedka. Istaraatiijiyaddani waxay ku siinaysaa sawir sax ah oo ku saabsan qaybaha shakhsiyaadka ah ee gacan ka geysta ROI-gaaga, kuwaas oo kuwa u baahan fiiro gaar ah iyo ilo badan, iyo kan la tirtirayo.
Isku toosinta ayaa iswaafajinaysa
Tartankaaga tartanka wuxuu kugu xiran yahay inaad hesho dhagaystayaasha saxda ah ee alaabadaada / adeegyadaada, ka dibna aad u hesho farriinta saxda ah iyaga.
Kala soociddu waa aaladda lagu caawiyo gaaritaanka tan, laakiin haddii aan lagu bartilmaameedsan isku-darka suuq-geynta saxda ah, waxaad lumineysaa wax-ku-oolnimada oo waxaad u goynaysaa xuduudahaaga. Xogta badan ee aad haysato waa in loo adeegsadaa in lagu go'aamiyo labada qof ee lala hadlayo iyo sida si hufan loola gaaro si loo wado kaqeybgal. Mar hadaad leedahay qaybinta isku toosan si loo hagaajiyo, iyo wax ka qabashada warbixin si isku mid ah waxtar u leh si loo helo aragtiyo, markaa ugu dambeyntii waxaad leedahay aqoonta aad ugu baahan tahay inaad si joogto ah ugu hagaajiso beddelaadyada.
Tags: Afhayeenisku xirkawacyigaxogta dalabdanjirayaasha caanka ahkala saarida astaantafaa'iidada tartankaisbeddelkaiskutallaabtahawlgelinta digitaliibinta wadistaKartiwacdiyayaalkordhiya sheekooyinkaSaameeyayaashajeclaantamarketingwaxqabadka suuqgeyntaHagaajintasuuq geyntagadashadayaree qashinkaqaybinta
Adeegga Macaamiisha Bulshada ee Suuqleyda
GoAnimate wuxuu ku darayaa shirkad, sabuurad, iyo astaamaha muuqaalka muuqaalka